Faran’ny taona tany Toamasina : jiolahy iray maty voatifitra, iray matin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Faran’ny taona tany Toamasina : jiolahy iray maty voatifitra, iray matin’ny fitsaram-bahoaka
Anisan’ireo olona enina, namoy ny ainy tany Toamasina, nandritra ny fetin’ny faran’ny taona teo ireto roalahy ireto. Raha lavon’ny balan’ny polisin’ny UIR teo am-panaovana ny asa ratsiny ny voalohany, matin’ny fitsaram-bahoaka kosa ny ilay faharoa.
Nahatratra 118 ny olona naiditra hopitaly, ary olona enina maty, ka maty tao amin’ny hopitaly ny roa tamin’ireo, nandritra ny fety tany Toamasina. Voalaza fa nilamindamina ireo mpiasan’ny fahasalamana niandry raharaha tany amin’ny Hopitalibe Toamasina, nanomboka ny zoma 29 desambra ka hatramin’ny alin’ny voalohan’ny volana janoary 2018, andron’ny taom-baovao. Tao anatin’ io efatra andro io, 168 ireo nila fitsaboana na fizahana ara-pahasalamana tao amin’ny sampana vonjy taitra ny Hopitaly be, raha nahatratra hatramin’ny 204 izany ny efatra andro nialohan’ny fetin’ny Krismary. 118 tamin’ ireo 168 no naiditra hopitaly hanaraha-maso akaiky ny fahasalamany, raha nahatratra 140 kosa ireo naiditra hopitaly tamin’ireo 204 nandritra ny fetin’ny Krismasy 2017.
Olona roa maty tao amin’ny hopitaly, raha nisy efatra hafa kosa maty tany ivelany ka nisy nanatitra tao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly, ny andron’ny zoma 29 desambra ka hatramin’ny andron’ny talata 2 janoary.
Anisan’izany ilay jiolahy maty voatifitry ny polisy, ilay tovolahy tsy fantatra matin’ny fitsaram-bahoaka. Faty fahatelo, renim-pianakavina hita faty ny marain’ny talata teo teny amoron-dranomasina, mifanila amin’ ny tobin’ny tafika sy ny Lisea Jacques Rabemananjara, teo amin’ny faritra betsaka vazaha manao tranon-dopy sy mivarotra zava-pisotro. Tsy
fantatra mazava ny antony nahafaty ity renim-pianakaviana tokony ho 32 taona ity. Fahafatesana fahefatra, raim-pianakaviana 35 taona iray avy ao Antanandava, tratra ny aretin-po ka maty tampoka teny an-dalana nialoha ny nahatongavany tao amin’ny sampana vonjy taitra, ny talata 2 janoary tokony ho tamin’ny 11 ora sy 30 minitra.
Lozam-pifamoivoizana niniana natao
Miisa sivy ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Toamasina. Anisan’izany ny loza iray niniana natao. Voalaza fa nentina andian-jatovo efa mamomamo ilay fiara ka noheverin’izy ireo fa mitovy amin’ny lakana ka afaka mandeha anaty rano izany. “Nialana ny godorao malalaka sy tetezana fandehanan’ny fiara fa nanaraka fasika an-dranomasina ary nihevitra ny
hiampita vavavinany. Vokany, nihitsoka tao anaty rano teo amin’ny vavavinany izay ifanapahan’ny ranomasina sy ranomamy ilay fiara”, hoy ny fanazavana.
Miisa 13 kosa ny trangana faharatrana vokatry ny ady sy tombok’ antsy, raha telo ireo ratra
vokatry fianjerana amin’ny godorao. Olona iray namono tena; ity farany izay mbola
miady amin’ny fahafatesana amin’ny fitsaboana azy. Amin’ny ankapobeny, nilamina ny tao Toamasina nandritra ny fety, na teo aza ireto rehetra ireo.